ပြိုင်ပွဲမှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပေမဲ့ အောင်လအန်ဆန်ရဲ့အပြုအမူလေးက သူရဲကောင်းဆန်လွန်းတဲ့ အတွက်ချီးကျူးလိုက်တဲ့ အမွန်း – Nyi Ma Lay
ပြိုင်ပွဲမှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပေမဲ့ အောင်လအန်ဆန်ရဲ့အပြုအမူလေးက သူရဲကောင်းဆန်လွန်းတဲ့ အတွက်ချီးကျူးလိုက်တဲ့ အမွန်း
ပရိသတ် ကြီးရေ သီချင်း ကောင်းလေး တွေကို သီဆိုရင်း ပရိသတ် ရင်ထဲကို ရောက်ရှိ လာခဲ့တဲ့ အဆိုတော် အမွန်း ကိုတော့ သီချင်း ချစ်သူတိုင်း မှတ်မိကြ အုန်းမယ် ထင်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ချစ်ရ သူနဲ့ ပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ခရီးကို လျှောက်လှမ်း နေပြီး နိုင်ငံ ရပ်ခြားမှာ နေထိုင် လျှက် ရှိပါတယ်။ သူမကတော့ ကြိုးဝိုင်း ထဲက သူရဲကောင်း အောင်လအန်ဆန် ကိုချီးကျူးလိုက်ပါတယ်။
မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့၊ စင်္ကာပူ နိုင်ငံမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ MMA Full Circle စိန်ခေါ်ပွဲမှာ ဗမာ့ စပါးအုံး အောင်လအန်ဆန်း ဟာ ပြိုင်ဘက် ရုရှား ကစားသမား ဗိုင်တယ်လီ ဘစ်ဒစ်ရှ် ကို ရှုံးနိမ့် ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တတိယ အချီပြီးသည် အထိ အနိမ့် အရှုံး မပေါ်ခဲ့ပေမယ့် ဒိုင် လူကြီးတွေရဲ့ အမှတ်ပေး စနစ်နဲ့ ဆုံးဖြတ်ရာမှာ တော့ တစ်ပွဲလုံး ချုပ်ကွက် တွေနဲ့ အောက်ရောက် နေတဲ့ အောင်လ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ ပါတယ်။ အောင်လ ရှုံးနိမ့်သွား ခဲ့ပေမယ့် မြန်မာပြည်သူ တွေကတော့ ချစ်ဆဲ အားပေးဆဲ ပါပဲနော်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဆိုတော် အမွန်း ဟာ” Whatafight !!! ပွဲလည်း ပြီးရော ချက်ချင်း သူတို့ မဟုတ်တဲ့ အတိုင်း ပြုံးပြီး အချင်းချင်း အားပေးလို့ ! ကြိုးဝိုင်းထဲက သူရဲကောင်း Aung La Nsang Thank you foragood fight!!! ” လို့ ရေးသား ဂုဏ်ပြု ထားပါတယ်။
ဗမာ့ စပါးအုံး အောင်လအန်ဆန်း ဟာ ပွဲအတွက် အကောင်းဆုံး ပြင်ဆင် ကြိုးစားခဲ့ ပေမယ့် ကြိုးစားခဲ့ သလို မဖြစ် ခဲ့တဲ့ အတွက် ပရိသတ် များကို စိတ်မကောင်း ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ အတွက် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပြီး နောက်ပွဲတွေ အတွက် အကောင်းဆုံး ကြိုးစား ပြင်ဆင် သွားမယ်လို့ ဂတိ ပေးလိုက် ပါတယ်။ အောင်လ ဟာ မြန်မာ ပြည်ကြီးနဲ့ ပြည်သူ ပြည်သားများ အားလုံးအတွက် ဆုတောင်းပေး ထားပါ သေးတယ်။
ပရိသတ္ ႀကီးေရ သီခ်င္း ေကာင္းေလး ေတြကို သီဆိုရင္း ပရိသတ္ ရင္ထဲကို ေရာက္ရွိ လာခဲ့တဲ့ အဆိုေတာ္ အမြန္း ကိုေတာ့ သီခ်င္း ခ်စ္သူတိုင္း မွတ္မိၾက အုန္းမယ္ ထင္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ခ်စ္ရ သူနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ အိမ္ေထာင္ေရး ခရီးကို ေလၽွာက္လွမ္း ေနၿပီး နိုင္ငံ ရပ္ျခားမွာ ေနထိုင္ လၽွက္ ရွိပါတယ္။ သူမကေတာ့ ႀကိဳးဝိုင္း ထဲက သူရဲေကာင္း ေအာင္လအန္ဆန္ ကိုခ်ီးက်ဴးလိုက္ပါတယ္။
မေန႔က ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔၊ စကၤာပူ နိုင္ငံမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ MMA Full Circle စိန္ေခၚပြဲမွာ ဗမာ့ စပါးအုံး ေအာင္လအန္ဆန္း ဟာ ၿပိဳင္ဘက္ ႐ုရွား ကစားသမား ဗိုင္တယ္လီ ဘစ္ဒစ္ရွ္ ကို ရႈံးနိမ့္ ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တတိယ အခ်ီၿပီးသည္ အထိ အနိမ့္ အရႈံး မေပၚခဲ့ေပမယ့္ ဒိုင္ လူႀကီးေတြရဲ့ အမွတ္ေပး စနစ္နဲ႔ ဆုံးျဖတ္ရာမွာ ေတာ့ တစ္ပြဲလုံး ခ်ဳပ္ကြက္ ေတြနဲ႔ ေအာက္ေရာက္ ေနတဲ့ ေအာင္လ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ ပါတယ္။ ေအာင္လ ရႈံးနိမ့္သြား ခဲ့ေပမယ့္ ျမန္မာျပည္သူ ေတြကေတာ့ ခ်စ္ဆဲ အားေပးဆဲ ပါပဲေနာ္။ ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အဆိုေတာ္ အမြန္း ဟာ” Whatafight !!! ပြဲလည္း ၿပီးေရာ ခ်က္ခ်င္း သူတို႔ မဟုတ္တဲ့ အတိုင္း ျပဳံးၿပီး အခ်င္းခ်င္း အားေပးလို႔ ! ႀကိဳးဝိုင္းထဲက သူရဲေကာင္း Aung La Nsang Thank you foragood fight!!! ” လို႔ ေရးသား ဂုဏ္ျပဳ ထားပါတယ္။
ဗမာ့ စပါးအုံး ေအာင္လအန္ဆန္း ဟာ ပြဲအတြက္ အေကာင္းဆုံး ျပင္ဆင္ ႀကိဳးစားခဲ့ ေပမယ့္ ႀကိဳးစားခဲ့ သလို မျဖစ္ ခဲ့တဲ့ အတြက္ ပရိသတ္ မ်ားကို စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ အတြက္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရၿပီး ေနာက္ပြဲေတြ အတြက္ အေကာင္းဆုံး ႀကိဳးစား ျပင္ဆင္ သြားမယ္လို႔ ဂတိ ေပးလိုက္ ပါတယ္။ ေအာင္လ ဟာ ျမန္မာ ျပည္ႀကီးနဲ႔ ျပည္သူ ျပည္သားမ်ား အားလုံးအတြက္ ဆုေတာင္းေပး ထားပါ ေသးတယ္။
Previous post သူ့သူငယ်ချင်းဖြစ်သူတို့ရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်မှာသာ လိုက်စားနေရလို့ အားနာကြောင်း သူ့ခံစားချက်ကိုပြောပြလာတဲ့ G FATT
Next post အမှုကိစ္စတွေပြီးဆုံးသွားပြီးနောက် ဝေးကွာနေတဲ့ အနုပညာမောင်နှမတွေနဲ့ ပြန်လည်ပြီးတွေ့ခွင့်ရတဲ့အတွက် ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ပုံလေးတွေမျှဝေလာတဲ့ အစ္စဏီ